Injini yokukhangela enexabiso eliphantsi-indiza yakho ngexabiso eliphambili
Fumana ifayile ye- Iinqwelomoya ezihamba phambili ngamaxabiso aphezulu Kuyenzeka ukuba ubulele kukhangelo lwenqwelomoya kunye namaphepha othelekiso akhoyo kwi-Intanethi kwaye uninzi lwabahambi basebenzisa ukugcina kunye nokuhamba ngexabiso eliphantsi.
Injini yokukhangela yexabiso eliphantsi
Usebenzisa ezi nqwelo moya zincinci ziphantsi zokukhangela uzokwazi ukufumana kwaye uthenge itikiti lenqwelomoya ngexabiso elifanelekileyo kunye nazo zonke iziqinisekiso. Esona sisombululo silula kwaye sikhawulezayo nesona sicebisa ukuba siphume kwiViajes.
Kodwa akukho kuphela olu khetho, zininzi nezinye iiwebhusayithi kumnatha. Zeziphi ezilungileyo? Ewe, njengoko wonke umhambi enamaphepha awathandayo, nantsi ke siza kuzisa ezona sizithandayo:
Rumbo: Iarhente edumileyo yokuhamba kwi-Intanethi ikunika lonke uluhlu lweenqwelomoya ngamaxabiso aphezulu ucofa apha.
Iiphupha: Enye yeearhente ezinkulu zokuhamba emhlabeni, ukuba ufuna ukufumana inqwelomoya efikelelekayo cofa apha.
Skyscanner Enye yezona injini zisetyenziswayo kwaye zaziwa kakhulu kwihlabathi liphela. Thelekisa phakathi kwamawaka okhetho kwaye ufumane inqwelomoya oyifunayo ngexabiso eliphantsi ucofa apha.
Yibambe: Unokufumana kwaye uthelekise amawaka eenqwelo moya kwi-injini yokukhangela. Ukungena nokubhukisha ngexabiso elifanelekileyo cofa apha
LiligoELiligo singafumana yonke into oyifunayo ukuze ubhukishe inqwelomoya efikelelekayo kunye nazo zonke iziqinisekiso. Cofa apha
Okokugqibela ikunika uluhlu olubanzi lweenqwelo moya. Ngena apha Thelekisa onke amaxabiso ukufumana inqwelomoya oyifunayo.
Ukuhamba ngenqwelo moya
Enye yeendlela ezikhuselekileyo nezona zikhawulezayo zothutho yindiza. Enkosi kuye, singaqala ukucwangcisa uhambo lwethu olulandelayo. Iindawo ekuyiwa kuzo zinokwahluka njengoko ukucinga kwethu kusivumela. Ewe kunjalo, okokuqala kwiinto zonke, kungcono ukuqala apho kufanelekileyo ukuba siyenze khona: ukujonga ngeenqwelo eziphantsi.
Ukuba kukodwa, kwikhefu siza kushiya uhlahlo-lwabiwo mali oluphezulu, akusoloko kufuneka lusekwe kwiinqwelomoya. Namhlanje kukho izibonelelo ezininzi kunye nezaphulelo, apho unokufumana khona Iinqwelomoya ezinendleko eziphantsi, phantse ngaphandle kokucinga.
1 Injini yokukhangela yexabiso eliphantsi
2 Ukuhamba ngenqwelo moya
3 Izibonelelo zokubhukisha inqwelomoya kwi-Intanethi
4 Fumana iinqwelomoya ezingabizi kakhulu kwindawo oya kuyo
5 Zisebenza njani iinjini yokukhangela zexabiso eliphantsi
6 Iindawo eziphambili zokuhamba ngenqwelomoya
6.1 Iinqwelomoya ezitshiphu ziya eLondon
6.2 Iinqwelomoya ezingenaxabiso lincinci ukuya eMadrid
6.3 Iinqwelomoya ezinendleko eziphantsi eziya eBarcelona
6.4 Iinqwelomoya ezitshiphu ziya eParis
6.5 Ungabhabha njani ngenqwelomoya ukuya eRoma
Izibonelelo zokubhukisha inqwelomoya kwi-Intanethi
Enye yezona zimvo zibalaseleyo xa kuziwa bhukisha inqwelomoya kwi-intanethi, kukwenza ngokukhululekileyo, ngaphandle koncedo lomntu. Siza kunikezela ixesha elininzi kuyo, kodwa kuba kufuneka sithelekise kwaye sifunde lonke ulwazi esinikwa yi-intanethi.
Khangela ngeenkcukacha ezinkulu: Okokuqala, kufuneka sifumane injini yokukhangela elungileyo, njengaleyo sikunika yona. Akuyomfuneko into enzima kakhulu, kodwa ukwazi ukuba siyakuyifumana kanye le nto siyifunayo. Into elula kwaye ekhawulezayo eyenza umsebenzi wethu ube lula. A injini yokukhangela elungileyo iya kuba nebhokisi yokugcwalisa ukusuka kwimvelaphi ukuya kwindawo ekuyiwa kuyo. Kwangokunjalo, ukuhamba kunye nokubuya kubalulekile ukuze siphumelele nohambo lwethu. Kwimizuzwana nje, siya kuba nazo zonke iinqwelomoya ezinamaxabiso aphantsi ezisenazo izihlalo.
Iibids: Ngokuqinisekileyo, Izibonelelo zikwangumyalelo wosuku. Ke, ayonzakalisi ukujonga iiwebhusayithi ezahlukeneyo ukuze ukwazi ukuthelekisa amaxabiso aphezulu. Qinisekisa ukuba kuzo zonke, iintlawulo zokugqibela zichazwe kakuhle, eziza kubonakala kwixabiso. Musa ukuthabathwa zizibonelelo ezinkulu, ngaphandle kokufunda kakuhle ukuprinta.
Uxolo lwengqondo kunye nentuthuzelo: Ewe sizakwenza konke oku ekhaya. Impelaveki, xa sinexesha elininzi, isenokuba lelona xesha lifanelekileyo. Ngale ndlela, siya kuba nakho ukuhamba ngendlela ezolileyo, Ukuthelekisa zonke iintlobo zokubhabha kunye nezibonelelo ezithiwe thaca kuthi. Ngokuqinisekileyo ekucofeni okumbalwa uya kuba nayo yonke into oyifunayo kuhambo olungalibalekiyo.
Fumana iinqwelomoya ezingabizi kakhulu kwindawo oya kuyo
Njengoko besesitshilo ngaphambili, okokuqala kukucinga ngendawo esifuna ukuya kuyo. Ngoku siyibonile, yintoni esinokuyenza ukufumana iinqwelomoya ezingabizi kakhulu?
UkuzinzaNgaphandle kwamathandabuzo, ukuba bhetyebhetye kweeshedyuli sesinye sezixhobo zethu zokuba sikwazi ukufezekisa okuhle izivumelwano zokuhamba ngenqwelomoya. Gcina ukhumbula ukuba amaxabiso aya kunyuka xa sikhetha indawo ethandwa kakhulu kunye nabakhenkethi. Ngendlela efanayo, sonke siyazi ukuba aphi amaxesha onyaka aphezulu kunye nefuthe abaya kuba nalo kumaxabiso. Ngenjini yokukhangela inqwelomoya, uya kuba nakho ukufumana indawo ongakhange ucinge ngayo kodwa ngamaxabiso amahle ngokwenene. Indlela yokuqhutywa kunye nokufumana iindawo ezizodwa.
Ngaba uza kuthenga inqwelo moya kwangoko okanye emva kwexesha?: Kuhlala kukho ukuthandabuza okukhulu kulo mbuzo. Akukho lula ukuyiphendula. Iya kuxhomekeka kwizinto ezininzi, kodwa singatsho ukuba ukubhukisha kwangaphambi kwexesha kwaye emva kwexesha kunokukhokelela ekunyukeni kwexabiso letikiti. Yintoni esinokuyenza kwezi meko? Ewe, njengommiselo ngokubanzi kuthiwa kwasekuqaleni, bhukisha iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Kwelinye icala, kutshanje, malunga neeveki ezintathu okanye ezine ngaphambi kokuqala uhambo lwakho. Ngokwezibalo zearhente, kucacisiwe ukuba ixesha elichanekileyo lokuthenga inqwelomoya ngexabiso eliphantsi li malunga neentsuku ezingama-55 ngaphambili. Emva kweli xesha, amaxabiso anokuphinda anyuke kwakhona, ke soloko ulumke kakhulu.
IsikaliNangona ngamanye amaxesha inokuba yingxaki, ikwayenye into ephambili ekufumaneni iinqwelomoya ngexabiso eliphantsi. Ngaphandle kwamathandabuzo, zikhona iindawo eziya kuzo ezifuna kwaye, nangona zisiphambukisela kwenye indawo, into ebalulekileyo sisiphumo Ixabiso lokugqibela. Indlela egqibeleleyo yokulahleka kuloo ndawo besingayazi kwaye iya kusinika ixesha lokuyibona ngaphambi kokuba siphinde sihambe.
Zisebenza njani iinjini yokukhangela zexabiso eliphantsi
Akuthandabuzeki Injini yokukhangela yenqwelo moya sesinye sezixhobo ezilula ukuzisebenzisa. Mhlawumbi kungenxa yokuba ineebhokisi eziyimfuneko kuphela ukuba zibe mfutshane kuphando lwethu. Kuqala, uya kubonisa imvelaphi. Unokukhetha ngokuthe ngqo isikhululo seenqwelomoya esikufutshane kunye negama lesixeko sakho. Ngendlela efanayo, kuya kufuneka wenze into efanayo ngokuya kwindawo oya kuyo. Indawo apho uzokonwabela iholide yakho oyifaneleyo.
Nje ukuba oku kugcwalisiwe, kuyakufuneka siye kubona iintsuku zokubaleka kwethu. Ikhalenda iya kubonakala, ke kuya kufuneka ukhethe kuphela usuku oluthile. Ukongeza, unokukhetha phakathi kokuba ngaba yi indlela enye okanye uhambo lokuya nokubuya. Elula, akunjalo? Ewe, kuya kufuneka ucofe iqhosha, "Khangela" kwaye kunjalo. Ngeli xesha ukhetho olunenkcazo kuzo zonke iindlela ziya kuvela. Iiwebhusayithi ezahlukeneyo ezikunika iinqwelomoya ngeenqwelomoya ngexabiso elikhulu. Ke unokuthelekisa ukhethe eyona ikufaneleyo.
Iindawo eziphambili zokuhamba ngenqwelomoya
Iinqwelomoya ezitshiphu ziya eLondon
Enye ye iindawo eziphambili yiLondon. Unyaka ngamnye baninzi abakhenkethi abaza kulazi ikomkhulu laseNgilani. Ke, unokufumana iinqwelomoya ezingabizi kakhulu ukuya eLondon nanini na ufuna. Zininzi iinkampani ezinikezela ngazo kwaye yiyo loo nto, kwiinjini yokukhangela ungathelekisa zonke iinqwelomoya, kunye neeshedyuli kunye namaxabiso. Phakathi kwezona zibalulekileyo yiVueling, iRyanair okanye iAir Europa. Ukongeza, unohambo kwizikhululo zeenqwelomoya eziphambili nakwiiyure ezininzi emini. Awunasizathu sakungayi!
Iinqwelomoya ezingenaxabiso lincinci ukuya eMadrid
Ngokufanayo, ikomkhulu laseSpain lifikelwa ziindwendwe ezininzi. Iindiza eziya eMadrid zihlala zitshiphu ezishiya into yokuqala ekuseni. Ukongeza, phakathi evekini kuya kubakho ukubaluleka kokubona ukwehla kwexabiso lokugqibela. Ngaphezu nje kweyure uya kuba usiya kwindawo oya kuyo.
Iinqwelomoya ezinendleko eziphantsi eziya eBarcelona
E-Barcelona siza kudibana nesikhululo seenqwelomoya i-El Prat. Yeyona yesibini ngobukhulu eSpain, ke iinqwelomoya kunye nabakhweli abayityelelayo yonke imihla abanakubalwa. Inemimandla emithathu yokususa kunye nendawo yokufika. Inenkampani ezininzi zesizwe kunye nezamazwe aphesheya, ke kuya kuba lula soloko ufumana iinqwelomoya ngexabiso eliphantsi.
Iinqwelomoya ezitshiphu ziya eParis
ukuba Bhabhela eParisSineenkampani ezahlukeneyo njenge-Iberia, i-Air Europa, iBritish Airway okanye iVueling, phakathi kwabanye. Iya kuhlala ixhomekeke kwindawo ekuyiwa kuyo kunye nendawo yokufika. IParis ineenqwelo moya ezintathu. UCharles de Gaulle, uOrly noBeauvais. Zonke zidityaniswe kakuhle kwiziko.
Ungabhabha njani ngenqwelomoya ukuya eRoma
Ukuba ufuna bhabha uye eromaKuya kufuneka uyazi ukuba ineenqwelo moya ezimbini zamanye amazwe. Kungenxa yokuba ukugcwala kwabatyeleli bakho kuyongezwa minyaka le. Ezinye zeenkampani ezinexabiso eliphantsi ezifika yiVueling, iRyanair okanye i-Easyjet. Kuzo, unokuhlala ufumana izibonelelo ezingaphantsi kwama-30 eeurosokoko uphethe kuphela umthwalo wesandla. I-Barcelona, ​​i-Ibiza, iMadrid okanye iSeville zezinye zeengongoma eziphambili zokubaleka ngqo eRoma.
Njengoko ubona, kukho iindawo ezininzi zokutyelela kunye namaxabiso amaninzi angabizi. Kuya kufuneka ukhethe iintsuku kwaye uqale ukonwabela iholide yakho oyifaneleyo.